गणेशप्रसाद तिमिल्सिना महाभियोगको फन्दामा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट आउट ! - Compaq News
गणेशप्रसाद तिमिल्सिना महाभियोगको फन्दामा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट आउट !
काठमाडौं, राष्ट्रियसभाको १२ माघको चुनावी परिणामले नयाँ घटना विकास गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका पाँच दल राष्ट्रियसभामा दुई तिहाईमा पुग्ने अवस्था बनेको छ । एमालेले हाल रहेको ८ सिटमा ७ सिट गुमाएको छ । यसबाट २० फागुनपछि एमाले राष्ट्रियसभामा १७ सिटमा खुम्चने भएको छ ।
नेकपा एमाले-१७ / माओवादी केन्द्र-१५ / नेपाली काँग्रेस-१० / नेकपा एस-९ / जसपा-३ / राजमो-१ / लोसपा-१ / स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटा-१ / मनोनित कतै नखुलेका बामदेव गौतम-१
/ मनोनित हुन बाँकी-१